Monogamous Prairie Vole (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အဆိုပါ Monogamous Prairie Vole (2007) ခုနှစ်တွင်ဖက်တမင်းဆေးပြားဆုကြေး
comments: အခြေခံပညာရဝုဏ်စှဲအကျိုးကို circuitry အားဖြင့်မျှဝေအဆိုပါစုံတွဲကို Bond ယန္တရားများပုန်းကွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ porn စွဲထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲတွင်တစ်စုံ-Bond ယန္တရားများသက်ရောက်သည်။
အဆိုပါ Monogamous Prairie Vole ခုနှစ်တွင်ဖက်တမင်းဆေးပြားဆုကြေး
neuroscience လက်တ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဇူလိုင် 10, 2009 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
neuroscience လက်တ။ မေလ 17, 2007; 418 (2): 190-194 ။
မတ်လ 14, 2007 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neulet.2007.03.019
Brandon ဂျေ Aragona, Jacqueline အမ် Detwilerနှင့် Zuoxin ဝမ်*
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် neuroscience လက်တ
မကြာမီကလေ့လာမှုများကို (monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် pair တစုံဘွန်း၏သောအာရုံကြောစည်းမျဉ်းကိုပြသကြMicrotus ochrogaster) ပိုပြီးရိုးရာဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်ရှာကြံမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်, လူမှုရေးအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားခိုင်မာတဲ့ interaction ကမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကဒီမျိုးစိတ်အတွက်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးသရုပ်ပြမူးယစ်ဆေးလေ့လာမှုများများအတွက်မော်ဒယ်အဖြစ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအဘို့, စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးမူးယစ်ဆေးကုသမှုကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူထိုး-မှီခိုခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကဒီမျိုးစိတ်အတွက်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်၏ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားများကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သော interaction က၏အခြေခံ neurobiology အပေါ်လူမှုရေးအပြုအမူများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
keywords: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, စွဲလမ်း, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး, ပူးတွဲမှု, လူမှုရေးစဘွန်း, မယား
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းများစွာသောအချက်တွေရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့တွင်မျိုးဗီဇနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရရှိနိုင်မှု, ကောင်းစွာရိုးရာဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်နှင့်အတူလုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြနှင့်အလွန်အပြုအမူရှာကြံမူးယစ်ဆေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပြသခဲ့ကြကြောင်း variable တွေကို [ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်း1, 18, 22, 59] ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်လူသားများတွင်တာမူးယစ်ဆေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများသည်အခြားရှုပ်ထွေး [ရှိပါတယ်31] ။ ရိုးရာကြွက်ဘာသာရပ်များလူသားမြားသဖွငျ့ပြသသောလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကအလားတူပြကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက variable ကို [ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာဖို့ပိုပြီးခက်ခဲသည်4] ။ Non-လူ့မျောက်ဝံများလေ့လာစရာများ [မူးယစ်ဆေးယူပြီးအပေါ်လူမှုရေးအဆင့်ဆင့်၏အရေးပါမှုကိုသရုပ်ပြ39] ။ သို့သော်မျောက်စမ်းသပ်ချက်အများဆုံးဓါတ်ခွဲခန်းများအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့မဟုတ်ကကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်ကိုလေ့လာခဲ့ကြပါလျှင်ထိုကွောငျ့လူမှုရေးအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအကြားအပြန်အလှန်၏ neurobiology နားလည်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူချောမွေ့မည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ (အလွန်လူမှုရေးကြွက်မျိုးစိတ်တည်ထောင်အားဖြင့် monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဒီအဆုံးဆီသို့တစ်ဦးကနဦးခြေလှမ်းယူကြပြီMicrotus ochrogaster), မူးယစ်ဆေးလေ့လာမှုများအဘို့။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole [လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏လေ့လာမှုများများအတွက်အစွမ်းထက်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်13, 23] ။ ယောက်ျားနှင့်ဤမျိုးစိတ်အမျိုးသမီး [တဦးတည်းအဖော်နှင့်အတူဦးစားပေးမိတ်လိုက်ပြသ20] မိဘအပြုအမူများမြင့်မားပြ [36-38, 43] နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရင်တောင်ထိန်းသိမ်းထားသည့်တည်မြဲ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, ဖွဲ့စည်းရန်  ။ Pair ကိုနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးပုံမှန် [မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်60, 61] နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ pair တစုံဘွန်း၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းသို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေး  ။ အထူးသဖြင့်, မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများပြင်းထန်စွာနျူကလီးယပ် accumbens နှင့် ventral pallidum အပါအဝင်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ၏သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်မူတည်ကြောင်း pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြသကြပါပြီ [2, 3, 24, 33-35] ။ ဤရွေ့ကားဦးနှောက်ဒေသများ [ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်လိင်ကဲ့သို့အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်, အကြောင်းသတင်းအချက်အလက် processing များအတွက်အရေးပါများမှာ9, 29, 46, 47], ဤ circuitry အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးအဓိကပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် .
ကြောင်း pair တစုံဘွန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတူတူပင်အာရုံကြောစနစ်များပါဝင်ပတ်သက်နေပေးပြီ, လူမှုရေးအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာအကြားသိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်ဖြစ်ဖွယ်ရှိရှိသေး၏။ ကြှနျုပျတို့သညျဤမျိုးစိတ်အတွက်စိတ်ကြွဆေး (AMPH) သွေးဆောင် conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေး (CPP က) တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးလေ့လာမှုများများအတွက်အလားအလာမော်ဒယ်အဖြစ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ထူထောင်ခဲ့ကြသည်ဤ interaction က၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ AMPH ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရသည်သွေးဆောင် CPP ကထိုးကြောင်းနှင့်အမျိုးသမီးမူးယစ်ဆေးကုသမှုကိုပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် pair တစုံဘွန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားအပြန်အလှန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အနာဂတ်လေ့လာမှုများများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်သည်။
ဘာသာရပ်များလိင်နုံအထီး (ဎ = 37) ဖြစ်ကြသည်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို (ဎ = 36) တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းမွေးမြူရေးကိုလိုနီများထံမှ voles prairie ။ အသက် 21 ရက်ပေါင်းမှာဘာသာရပ်များ (12cm မြင့်မားသော× 28cm ရှည်လျား× 16cm ကျယ်ပြန့်) ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်လိင်တူချင်း sibling အားလုံးအတွက်နို့နှင့်သျောခဲ့ကြသည်။ ရေနှင့်အစားအစာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitumတစ် 14: 10 အလင်း-မှောင်မိုက်သံသရာထိန်းသိမ်းထားနှင့်အပူချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ 80-120g အကြားစမ်းသပ်ပြီး, အလေးချိန်ချိန်တွယ်သောအခါအအားလုံးသည်ဘာသာရပ်များအသက် 35-50 ရက်ပေါင်းအကြားခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်များနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်အမျိုးသားသိပ္ပံ (NIH ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းအမှတ် 80-23) နဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ဘာသာရပ်များအစပိုင်းတွင်2မိများအတွက် 30-Chambers ရာအရပျ preference ကိုယန္တရားအတွက် Pre-စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ယန္တရားအနက်ရောင်ပလပ်စတစ်လှောင်အိမ်ပါဝင်သည် (20 × 25 × 45 စင်တီမီတာ) တစ်ဝါယာကြိုးကွက်အဖုံးနဲ့အစိုင်အခဲသတ္တုအဖုံးတစ်ခုမဟုတ်ရင်တူညီအဖြူရောင်ပလပ်စတစ်လှောင်အိမ် (20 × 25 × 45 စင်တီမီတာ) နှင့်အတူ။ အဆိုပါဝါယာကြိုးကွက်အဖုံးတစ်မဲမှောင်ပတ်ဝန်းကျင်နေသူများကဖန်တီးပေးသောအနက်ရောင်အိတ်များ, များအတွက်အသုံးပြုတဲ့အစိုင်အခဲသတ္တု lids နှိုင်းယှဉ်အဖြူရောင်အိတ်များထဲသို့ပိုပြီးအလင်းခွင့်ပြု။ အဆိုပါဘာသာရပ်များတဦးတစ်ဝက်ပိုင်းတွင်အဖြူရောင်လှောင်အိမ်ထဲမှာထားကြ၏ pre-စမ်းသပ်မှုရဲ့ start မှာ, အခြားတစ်ဝက်ကိုစပိုင်းတွင်မှောင်ခိုလှောင်အိမ်ကို (CPP ကစမ်းသပ်မှု၏အစမှာအသုံးပြုခဲ့သည်ကိုဤတူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း) တွင်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ လှောင်အိမ်တိရစ္ဆာန်နှစ်ခုအခန်းများအကြားလွတ်လပ်စွာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ပလပ်စတစ်ပြွန် (7.5 × 16 စင်တီမီတာ) ကချိတ်ဆက်ခဲ့သညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုလှောင်အိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသည်လှောင်အိမ်လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အချိန်တစ် locomotor ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီအစဉ် (Ross က Henderson, FSU) နဲ့ photobeam လပ်ချိန်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ pre-စမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဆိုပါအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူလှောင်အိမ်ဖြစ်စေဘို့ဟာမွေးရာပါ preference ကိုရှိခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကယောက်ျားနှင့်အတူရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုဒီမျိုးစိတ်ဖြူလှောင်အိမ်ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည် AMPH နှင့်အတူအနက်ရောင်လှောင်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ချိတ်တွဲခြင်းဖြင့်ဒီ preference ကို reverse ကြိုးစားခဲ့; တဖက်သတ်စမ်းသပ်ဆိုလိုသည်မှာ။
တစ်နေ့မှာတော့ pre-စမ်းသပ်ပြီးနောက်, ဘာသာရပ်များတဦးတစ်ဝက် introperitoneal ဆား၏ (IP) ထိုးဆေးကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်နှစ်နာရီတစ်ဝါယာကြိုးကွက်အဖုံးနဲ့အဖြူလှောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကျန်ရှိနေသောဘာသာရပ် 0.1, 0.5, 1.0 သို့မဟုတ် 3.0 ဖြစ်စေနှင့်အတူဆား / ကီလိုဂရမ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး sulfate mg နှင့်လည်းနှစ်နာရီအဘို့, အစိုင်အခဲသတ္တုအဖုံးနဲ့အနက်ရောင်လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာပေးခဲ့သည်။ အေးစက်အစည်းအဝေးများဆက်တိုက်အရှင်ဆားနှင့် AMPH များအတွက် 8 ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒဿနိကဗေဒများကို4နေ့ရက်ကာလအဘို့ alternated ။ အဆိုပါနေ့ရက်တွင်ချက်ချင်းအေးစက်၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကိုအောက်ပါတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-အခမဲ့ပြည်နယ်အတွက်ဘာသာရပ်များ 30 မိဘို့ရာအရပ်ကို preference ကိုယန္တရားမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ pre-စမ်းသပ်မှု, အေးစက်အစည်းအဝေးများနှင့် preference ကိုစမ်းသပ်မှုများအပေါငျးတို့သအလင်းအဆင့်ကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည် conditional ရာအရပျ, 10 အကြား: 00 နှင့် 14: 00h ။
တစ်ဦးက CPP က [အေးစက်မီနှင့်ပြီးနောက် AMPH-တွဲလှောင်အိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသည်အချိန်ကြာချိန်အတွက်အပြောင်းအလဲများကသတ်မှတ်ခဲ့သည်5] ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ရာခိုင်နှုန်းကို AMPH နှင့်ဆားကုသမှုနှစ်ခုစလုံး pre-စမ်းသပ်ရာမှစသောအပြောင်းအလဲအဖြစ် data တွေကိုတင်ပြ: အ AMPH (သို့မဟုတ်ဆား) တွင်သုံးစွဲစုစုပေါင်းအချိန် AMPH (သို့မဟုတ်ဆား) တွင်သုံးစွဲစုစုပေါင်းအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲအေးစက်ပြီးနောက်လှောင်အိမ်လှောင်အိမ်အေးစက်မတိုင်မီ (ဆိုလိုသည်မှာ 100 အားဖြင့်များပြားစေ pre-စမ်းသပ်မှု) ။ တွဲနမူနာ t-စမ်းသပ်မှုအေးစက်မီနှင့်ပြီးနောက် AMPH-တွဲလှောင်အိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသည်အချိန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ AMPH-တွဲလှောင်အိမ်တစ်ခုတိုးလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်ကတည်းကတအမြီးစမ်းသပ်မှုကို p-တန်ဖိုးများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း (နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ) နှင့်အညီ, ယောက်ျားများဆားဆေးထိုးခြင်းနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုအေးစက်အောက်ပါ (t = 16.7; p <) အနက်ရောင်လှောင်အိမ် (1.2 ± 11.7 မိနစ်) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဖြူရောင်လှောင်အိမ် (1.1 ± 4.29 မိနစ်) တွင်သုံးစွဲအချိန်ပိုမိုသိသိသာသာပိုမိုပြသခဲ့သည် ၀.၀၅) (သင်္ဘောသဖန်း။ 1a) ။ ထို့ကြောင့် non- ဦး စားပေးလှောင်အိမ်ဒီ preference ကို reverse ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်ချက်အတွက် AMPH- တွဲပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ AMPH (၀.၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) နည်းသောပမာဏသည်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမဆို ဦး စားပေးရသည် (t = 0.1; p> 0.78) (သင်္ဘောသဖန်း။ 1a) ။ သို့သော်အမျိုးသားများတွင် AMPH (၀.၅ မှ ၃.၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများဖြင့်အေးစက်စေသောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တွဲဖက်သောပတ်ဝန်းကျင် (t = ၂.၄၉၊ ၂.၁၁ နှင့် ၄.၉၅ အသီးသီး၊ p <0.5) (သင်္ဘောသဖန်း။ 1a).
ဖက်တမင်းဆေးပြားယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုသွေးဆောင်။ က) အထီး, ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (ဎ = 5) သည်နောက်ပိုင်းတွင်ဆားပတ်ဝန်းကျင် (ပွင့်လင်းဘား) အဖြစ်အစေခံမယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဘို့ဟာမွေးရာပါ preference ကိုပြသခဲ့သည်။ AMPH အေးစက် ...
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ဆားနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုအေးစက်အောက်ပါဖြစ်စေအခန်းထဲကအဘို့အဘယ်သူမျှမ preference ကိုရှိခဲ့သည်အဖြစ် (t = 0.52; p> 0.3) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအခန်းတစ်ခန်းလုံးအတွက်မွေးရာပါ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 1b) ။ ၀.၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ပြင်းထန်သည့် CPP (t = 0.1; p <1.60) ကို AMPH (၀.၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) နည်းနည်းသောက်ခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွဲထားသောပတ်ဝန်းကျင် (t = 0.07; p = 0.5) ကို ဦး စားပေးသည်။ ) (သင်္ဘောသဖန်း။ 1b) ။ အမျိုးသားများနှင့်မတူဘဲ AMPH (၁.၀ နှင့် ၃.၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများသည် CPP (t = 1.0 and 3.0 အသီးသီး; p> 1.25) ကိုသွေးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။သင်္ဘောသဖန်း။ 1b).
AMPH (1.0 နှင့် 3.0mg / ကီလိုဂရမ်) ၏မြင့်မားသောဆေးများယောက်ျားအတွက် CPP ကသွေးဆောင်သော်လည်းမအမျိုးသမီးနှင့် AMPH (0.1mg / ကီလိုဂရမ်) ၏နိမ့်ဆုံးထိုးအမျိုးသမီးပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်သည်ထင်ရှားပါကအမျိုးသမီးမူးယစ်ဆေးဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းထင်ရလိမ့်မယ်လို့ပေးထား ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုသမှု။ အဆိုပါ CPP ကယန္တရားအတွက်လှောင်အိမ် entries တွေကိုများ၏အရေအတွက်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့ကတည်းကဒါတွေကကွဲပြားခြားနားမှုလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်မဟုတ် (22.2 ± 1.4 ကူထီး; အမျိုးသမီး 20.1 ± 1.3; စံအမှား±ဆိုလို) ။ ထို့ပြင် locomotor လှုပ်ရှားမှု (ယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဖြစ်စေဘို့အေးစက်မီနှင့်အပြီးမပြောင်းခဲ့ဘူးစားပွဲတင် 1).
ယန္တရားကြိုတင်အေးစက်မှ (Pre-စမ်းသပ်မှု) တစ်ဦးနှစ်ဦး Chambers ရာအရပျ preference ကိုအတွင်းနှင့်အေးစက် (CPP က) အပြီးလှောင်အိမ်လက်ဝါးကပ်တိုင်အရေအတွက်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြား locomotor လှုပ်ရှားမှုမရှိခြားနားချက်ရှိပါသည်။ locomotor လှုပ်ရှားမှုမရှိကွာခြားချက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ...
ဤလေ့လာမှု monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်၏ပထမဦးဆုံးဆန္ဒပြပွဲကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်ဆင်တူ, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH-သွေးဆောင် CPP ကမှီခိုထိုးနေသည် [5, 58] ။ AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏လေ့လာမှုအများစုအထီးကြွက်များနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ပြီး, ဤလေ့လာမှုများ [0.3 နှင့် 3.0 အကြား AMPH ပြိုလဲအထိရောက်ဆုံးဆေးများ / ကီလိုဂရမ် MG ကြောင်းပြသ25, 55] အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကနေလက်ရှိရလဒ်တွေကိုနှင့်ကိုက်ညီမယ့်အကွာအဝေး။ အထီးအဘို့, အသုံးပြုတဲ့အမြင့်ဆုံးထိုး (3.0mg / ကီလိုဂရမ်) ပျမ်းမျှဆေးများ (0.5 နှင့် 1.0mg / ကီလိုဂရမ်) ထက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤသည် AMPH မြင့်မားဆေးများလျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်တကယ်တော့အတွက်ဆန္ဒရှိ .
အမျိုးသမီးများအတွက်, ဆေးထိုးတုံ့ပြန်မှု CPP ကသွေးဆောင်ဖို့ပျက်ကွက်, အထီး (0.1 နှင့် 1.0mg / ကီလိုဂရမ်) အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်း CPP ကနှင့်အဆင့်မြင့်ဆေးများဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ဖေါ်ပြခြင်းအသုံးပြုသောနိမ့်ဆုံးထိုး (3.0mg / ကီလိုဂရမ်), အတူဘယ်ပြပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ ဒါက [အမျိုးသမီး psychostimulants ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံခဲ့ကြကြောင်းပြသသောအခြားမျိုးစိတ်အတွက်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်7, 49] ။ အလားတူဘယ်ပြဆိုင်း [အမျိုးသမီးကြွက်တွေမှာ AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်ပြသပြီ16, 32] နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် CPP က  ။ AMPH နှင့်ကိုကင်းလည်း [ သာ. ကြီးမြတ်အပြုအမူာင်းအဖြစ်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် သာ. ကွီးမွတျတိုးစေ6] ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုထို့ကြောင့် [အမျိုးသမီး, ယေဘုယျအတွက်, ယောက်ျားထက်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး50].
ကြွက်များတွင် psychostimulant sensitivity ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုမှအဓိကပံ့ပိုးသွေးရည်ကြည်အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်  ။ အမျိုးသမီး estrous နှင့် exogenous အီစထိုဂျင်စဉ်အတွင်းအများဆုံးအထိခိုက်မခံများမှာလည်း [နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် AMPH-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေနဲ့ AMPH-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါး7, 8] ။ သို့သော်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles [မျိုးဥထွက်သွေးဆောင်နေကြ14, 27] နှင့်သွေးရည်ကြည်နှင့်ဦးနှောက် estradiol ၏အနိမ့် Basal အဆင့်ဆင့်ရှိ  ။ ဒီမျိုးစိတ်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုပိုသိသာမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ကြွက်များတွင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်သကဲ့သို့အနိမျ့ Basal estradiol စဉ် ovariectomized အမျိုးသမီးနေဆဲအထီးထက် AMPH ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံသော်လည်း, ခြားနားချက်များနဂိုအတိုင်းနှင့်အတူသူမြားကိုထက်လျော့နည်းကြံ့ခိုင်ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, ရှင်းပြခြင်းငှါ estrus သံသရာ .
သည်အခြားဟော်မုန်းစနစ်များလည်း psychostimulants ဖို့ sensitivity ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, corticosterone (CORT) မူးယစ်ဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ  နှင့် adrenalectomy ကြွက်များတွင် AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုဖယ်ရှားပေး  ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles [ရိုးရာဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သွေးရည်ကြည် CORT အလွန်မြင့်မားများ56] နှင့်ယောက်ျားပေါင်းနှင့်အမျိုးသမီးကုသမှုအမျိုးမျိုးတုန့်ပြန် CORT အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်သိသိသာသာကွာခြား  ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားထို့ပြင်မျိုးဗီဇကွဲပြားမှု  လည်းမူးယစ်ဆေးကုသမှု sensitivity ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မူးယစ်ဆေးကုသမှုလိင်ကွဲပြားမှုများ၏အခြေခံဇီဝဗေဒဖြေရှင်းရန်လိုအပ်နေပါသည်။
မူးယစ်ဆေးလေ့လာမှုများအဘို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ထူထောင် pair တစုံဘွန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားအပြန်အလှန်၏အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မိခင် Bond opioid အချက်ပြအပေါ်မှီခိုကြောင်းနှစ်ခုကျော်ဆယ်စုနှစ်လူသိများခဲ့ပြီးစဉ်တွင်  monogamous pair တစုံဘွန်းအတွက် opiates ၏အခန်းကဏ္ဍကို [အကြီးအကျယ်မသိနိုင်ပါဘူး54] ။ သို့သော်တစ်စုံဘွန်း၏ dopamine စည်းမျဉ်းများ၏အသေးစိတ်နားလည်မှု [ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်3] ဒါကြောင့် psychostimulants ၏ pair တစုံဘွန်းနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအလားတူအာရုံကြောယန္တရားများရှိသည်သောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် [3, 52] ။ ဒါက [သူတို့ရှင်သန်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအပြုအမူပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြောင်းလဲဦးနှောက် circuitry လုဘာလို့လဲဆိုတော့မူးယစ်ဆေးအစွမ်းထက်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အလွဲသုံးစားလုပ်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်10, 21, 28, 41], လူမှုရေးစဘွန်းအပါအဝင် [15, 26, 45] ။ တကယ်တော့ဒါဟာ [ဆင်းရဲမွဲတေပြီးလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသူတွေဟာသည်ဤအာရုံကြောလမ်းကြောင်းလှုံ့ဆော်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်40, 45] နှင့်လူမှုရေးအထောက်အပံ့ကိုစွဲလမ်းရမ္မက်ကိုလျော့ချစေခြင်းငှါ  ။ ဒါက [အပြုသဘောလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်မူးယစ်ဆေးစွဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်အကျိုးရှိကြောင်းကိုဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည်30, 31] ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက် pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိ voles မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ဆန့်ကျင် '' ကာကွယ်စောင့်ရှောက် '' လျှင်စမ်းသပ်ရန်နှင့်မျှော်လင့်မူးယစ်ဆေးစွဲကုသနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဝေဖန်စာဖတ်ခြင်းဒေါက်တာယန်လျူကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ZXW မှ BJA ဖို့ MH-67396 ပေးအပ်နှင့် DA-19627 နှင့် MH-58616 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ Ahmed က SH, Koob gf ။ အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်း: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1998; 282: 298-300 ။ [PubMed]
2 ။ နျူကလိယဘို့ Aragona BJ, လျူ Y ကို, Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 3483-90 ။ [PubMed]
3 ။ Aragona BJ, လျူ Y ကို, ယု YJ, Curtis JT, Detwiler JM, Insel TR, ဝမ် Z. နျူကလိယ differential dopamine accumbens monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 133-139 ။ [PubMed]
4 ။ Aragona BJ, ဝမ် Z. အဆိုပါမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းအပေါ်အပြုအမူ neuroendocrine သုတေသနတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Ilar ဂျေ 2004; 45: 35-45 ။ [PubMed]
5 ။ Bardo MT, Rowlett JK, Harris က MJ ။ opiate နှင့်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးအေးစက်သောအရပ် preference ကို: တစ် Meta-analysis သည်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1995; 19: 39-51 ။ [PubMed]
6 ။ Becker က JB ။ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic function ကိုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1999; 64: 803-12 ။ [PubMed]
7 ။ Becker က JB, Molenda H ကို, Hummer DL ။ ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုဖြန်ဖြေယန္တရားများအဘို့အဂယက်ရိုက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2001; 937: 172-87 ။ [PubMed]
8 ။ Becker က JB, Rudick CN ။ တစ်ဦး microdialysis လေ့လာမှု: striatal dopamine အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တိုးအပေါ်အီစထိုဂျင်သို့မဟုတ်ချို့ယွင်း၏လျင်မြန်သောသက်ရောက်မှုအီစထိုဂျင် Prime နေဖြင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1999; 64: 53-7 ။ [PubMed]
9 ။ Becker က JB, Rudick CN, Jenkins WJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 3236-41 ။ [PubMed]
10 ။ Berke JD, Hyman SE ။ စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 25: 515-32 ။ [PubMed]
11 ။ Cabib S က, Puglisi-Allegra S က, Genua ကို C ရှိမုန် H ကို, Le Moal က M, Piazza PV ။ နေရာအသစ်အေးစက်ယန္တရားအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်စိတ်ကြွဆေး၏ထိုး-မှီခိုဆန္ဒရှိနှင့်အကြိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 1996; 125: 92-6 ။ [PubMed]
12 ။ ကာရိုး ME, Lynch WJ, Roth ME, မော်ဂန်အေဒီ, Cosgrove KP ။ လိင်နှင့်အီစထိုဂျင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2004; 25: 273-9 ။ [PubMed]
13 ။ Carter က CS, DeVries AC အ, Getz ll ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစျမယား၏ဇီဝကမ္မအလွှာ: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1995; 19: 303-14 ။ [PubMed]
14 ။ Carter က CS, Witt DM, Manock SR, အဒမ် Ka, Bahr JM, Carlstead K. ဟျောမုနျးအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အထီး-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုရွှေ့ဆိုင် estrus အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မျိုးဥထွက်၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1989; 46: 941-8 ။ [PubMed]
15 ။ ရှမ်ပိန်အက်ဖ်အေ, Chretien P ကို, Stevenson မှ CW, Zhang က ty, Gratton တစ်ဦးက, Meaney MJ ။ နျူကလိယအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 4113-23 ။ [PubMed]
16 ။ Cirulli က F, မွေးကင်းစကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်တွေမှာ D-စိတ်ကြွဆေး၏ Laviola G. အဝိရောဓိသက်ရောက်မှု: ကျား၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000; 24: 73-84 ။ [PubMed]
17 ။ de Vries GJ, Rissman EF, Simerly RB ယန် Ly, Scordalakes EM, လွန် CJ, Swain တစ်ဦးက, Lovell-တံဆိပ်ကို R ကို, Burgoyne PS, အာနိုးက AP ။ လိင် dimorphic အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်စရိုက်များအပေါ်လိင်ခရိုမိုဆုန်းသက်ရောက်မှု၏လေ့လာမှုများအတွက်တစ်ဦးကမော်ဒယ်စနစ်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 9005-14 ။ [PubMed]
18 ။ Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1014-7 ။ [PubMed]
19 ။ DeVries AC အ, DeVries ကို MB, Taymans S က, Carter က CS ။ corticosterone အားဖြင့်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) တွင် pair တစုံဘွန်း၏ Modulation ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1995; 92: 7744-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Dewsbury DA ။ မယား၏နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ။ Nebr Symp လှုံ့ဆျောမှု။ 1987; 35: 1-50 ။ [PubMed]
21 ။ di Chiara, G, Bassareo V ကို, Fenu S က, De Lucas, MA, Spina L ကို, Cadoni ကို C, Acquas အီး, Carboni အီး, Valentini V ကို, Lecca ဃ Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ: အနျူကလိယ shell ကိုကွန်နက်ရှင် accumbens ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 227-41 ။ [PubMed]
22 ။ Ferrario CR, Gorny, G, Crombag HS လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အာရုံကြောနှင့်ထိန်းချုပ်ကနေဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူ plasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 751-9 ။ [PubMed]
23 ။ Getz ll, Hofmann je ။ အခမဲ့-နထေိုငျမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, Microtus ochrogaster အတွက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းက။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1986; 18: 275-282 ။
24 ။ Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှု (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience များအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ 2000; 114: 173-83 ။ [PubMed]
25 ။ ဟော့ဖ်မန်း, DC, Beninger RJ ။ ရွေးချယ် D1 နှင့် D2 dopamine agonists ရာအရပျအေးစက်အတွက်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ဘဲ conditional အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်သင်ယူမှု၌တည်၏။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1988; 31: 1-8 ။ [PubMed]
26 ။ Insel TR ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှုတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း Physiol ပြုမူနေ။ 2003; 79: 351-7 ။ [PubMed]
27 ။ Kauffman AS, Rissman EF ။ မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မျိုးဥထွက်၏ Neuroendocrine ထိန်းချုပ်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Neill JD, အယ်ဒီတာ။ မျိုးပွား၏ Knobil နှင့် Neill ရဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒ။ Elsevier; 2006 ။ စစ။ 2283-2326 ။
28 ။ ကယ်လီ AE ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲ: shared အာရုံကြော circuitry နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 44: 161-79 ။ [PubMed]
29 ။ ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3306-11 ။ [PubMed]
30 ။ Knight က DK, Simpson DD ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကုသမှုစဉ်အတွင်း client ကိုတိုးတက်မှုအပေါ်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှု။ 1996; 8: 417-29 ။ [PubMed]
31 ။ Knight က DK, Wallace GL, ဂျိုး GW, Logan သည် SM ။ လူနေအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးတွင်ပြောင်းလဲမှု။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှု။ 2001; 13: 533-47 ။ [PubMed]
32 ။ Laviola, G, Gioiosa L ကို, Adriani W က, Palanza P. D-စိတ်ကြွဆေး-ဆက်စပ်အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအီစထိုဂျင် endocrine disruptors မှမွေးဖွားမီထိတွေ့ကြွက်များတွင်လျှော့ချနေကြသည်။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 2005; 65: 235-40 ။ [PubMed]
33 ။ Lim က MM, ဝမ် Z ကို, Olazabal DE, Ren က X, Terwilliger EF, Young က LJ ။ တစ်ခုတည်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကြိုးကိုင်နေဖြင့်တစ်ဦးကရာမျိုးစိတ်အတွက် Enhanced မိတ်ဖက် preference ကို။ သဘာဝ။ 2004; 429: 754-7 ။ [PubMed]
34 ။ Lim က MM, Young က LJ ။ အဆိုပါ ventral pallidum အတွက် V1a receptors vasopressin ၏ပိတ်ဆို့ monogamous အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကာကွယ်ပေးသည်။ Soc neuroscience ။ 2002 ABS: Program ကိုအမှတ် 89.2 ။
35 ။ လျူ Y ကို, ဝမ် ZX ။ နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience ။ 2003; 121: 537-44 ။ [PubMed]
36 ။ Lonstein JS ။ အဆိုပါ biparental မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်အပြုအမူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ် haloperidol နှင့်အတူ dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002; 74: 11-9 ။ [PubMed]
37 ။ Lonstein JS, De Vries GJ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကညာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိဘ၏အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် gonadal ဟော်မုန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2000; 114: 79-87 ။ [PubMed]
38 ။ McGuire B, Novak အမ်ဟာမြက်ခင်း vole (Microtus pennsylvanicus), မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (အမ် ochrogaster) နှင့်ထင်းရှူး vole (အမ် pinetorum) Animation ပြုမူနေအတွက်မိခင်အပြုအမူ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ 1984; 32: 1132-1141 ။
39 ။ မော်ဂန်: D, Grant က ka, Gage, HD, Mach RH အ, Kaplan JR, Prioleau အို Nader SH, Buchheimer N ကို, Ehrenkaufer RL, Nader, MA ။ dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: မျောက်အတွက်လူမှုကြီးစိုး။ နတ် neuroscience ။ 2002; 5: 169-74 ။ [PubMed]
40 ။ Ness RM, Berridge KC ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 63-6 ။ [PubMed]
41 ။ Nestler EJ ။ သမိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်: opiate နှင့်ကိုကင်းစွဲ၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2004; 25: 210-8 ။ [PubMed]
42 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1445-9 ။ [PubMed]
43 ။ Oliveras: D, Novak အမ်ဟာမြက်ခင်း vole Microtus pennsylvanicus, ထိုထင်းရှူး vole အမ် pinetorum နှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အမ် ochrogaster အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ Animation ပြုမူနေ။ 1986; 34: 519-526 ။
44 ။ Panksepp J ကို, Herman BH, Vilberg T က, ဆရာတော် P ကို, DeEskinazi အပြည်ပြည်သွား။ Endogenous opioids နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1980; 4: 473-87 ။ [PubMed]
45 ။ Panksepp J ကို, Knutson B, Burgdorf ဂျေစှဲအတွက်ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များများ၏အခန်းကဏ္ဍ: တစ် neuro-ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်သစ် '' Self-အစီရင်ခံစာ '' တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ စွဲလမ်း။ 2002; 97: 459-69 ။ [PubMed]
46 ။ Pecina S ကိုစမစ် KS, Berridge KC ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ Hedonic ပူအစက်အပြောက်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2006; 12: 500-11 ။ [PubMed]
47 ။ Pfaus JG, Damsma, G, Wenkstern: D, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးသမီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 693: 21-30 ။ [PubMed]
48 ။ Piazza PV, Le Moal အမ် Glucocorticoids ဆုလာဘ်တစ်ခုဇီဝအလွှာအဖြစ်: ဇီဝကမ္မနှင့် pathophysiological ဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1997; 25: 359-72 ။ [PubMed]
49 ။ Roth ME, ME Carroll ။ long- သို့မဟုတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုမှအတို-access ကိုအောက်ပါသွေးကြောသွင်းကင်းစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004; 78: 199-207 ။ [PubMed]
50 ။ Roth ME, Cosgrove KP, ကာရိုး ME ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: preclinical လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004; 28: 533-46 ။ [PubMed]
51 ။ Russo SJ, Jenab S က, Fabian SJ, Festa ED, Kemen LM, ကိုကင်းများ၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Quinones-Jenab V. လိင်ကွဲပြားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 970: 214-20 ။ [PubMed]
52 ။ ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေး-ရှာမှပြန်သွားကြသည်: အာရုံကြောနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998; 51: 49-60 ။ [PubMed]
53 ။ Shapiro LE, Dewsbury DA ။ vole (Microtus ochrogaster နှင့်အမ် montanus) J ကို comp Psychol နှစ်ခုမျိုးစိတ်အတွက် Affiliate အပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များ, pair တစုံဘွန်းနှင့်အင်္ဂါဇာတ် cytology ။ 1990; 104: 268-74 ။ [PubMed]
54 ။ Shapiro LE, Meyer ME, Dewsbury DA ။ voles အတွက် Affiliate အပြုအမူ: မော်ဖင်းအကိုက်သက်ရောက်မှု, naloxone နှင့် Cross-Foster ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1989; 46: 719-23 ။ [PubMed]
55 ။ Spyraki ကို C, Fibiger HC, Phillips က AG က။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုအေးစက်၏ Dopaminergic အလွှာဟာ။ ဦးနှောက် Res ။ 1982; 253: 185-93 ။ [PubMed]
56 ။ Taymans SE, DeVries AC အ, DeVries ကို MB, နယ်လ်ဆင် RJ, Friedman TC, ကက်စထရိုက M, Detera-Wadleigh S က, Carter က CS, Chrousos မိသားစုဆရာဝန်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) ၏ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး: ပစ်မှတ်တစ်ရှူး glucocorticoid ခုခံဘို့သက်သေသာဓက။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး comp Endocrinol ။ 1997; 106: 48-61 ။ [PubMed]
57 ။ သောမတ်စ်လုပ် SA, Wolff Jo ။ Pair ကို Bond နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထဲမှာ "မုဆိုးမအကျိုးသက်ရောက်မှု" ။ ပြုမူနေ Processes ။ 2004; 67: 47-54 ။ [PubMed]
58 ။ Tzschentke TM အလိုအလျောက်။ မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ, မကြာသေးမီတိုးတက်မှုနှင့်အသစ်ကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်: အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်တိုင်းတာခြင်း။ prog Neurobiol ။ 1998; 56: 613-72 ။ [PubMed]
59 ။ Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-9 ။ [PubMed]
60 ။ Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) တွင်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး: လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ပြုမူနေ။ 1992; 26: 339-49 ။ [PubMed]
61 ။ Winslow JT မိပြီ N ကို, Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1993; 365: 545-8 ။ [PubMed]
62 ။ လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 1048-54 ။ [PubMed]